allsanaag.com - Warar Kooban oo Caalamka ku Saabsan
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3204	Days	19	Hours	06	Minutes	25	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Warar Kooban oo Caalamka ku Saabsan
Written by Shanle	Maraykanka: Labaatan sanno gudohood Shiinaha waxa uu noqonayaa dalka ugu horeeya dhaqaalaha adduunka, wuxuuna ka qaadi doonaa booska koowaad ee uu hada Maraykanaka uu ku jiro. Warbixin ay soo saarto Golaha Sirdoonka ee Maraykanka oo afartii sannaba mar la soo saaro ayaa lagu sheegay sida ay isku badali doonto arrimaha aduunka. Eeshiyaankana waxey yeelan doonaan awood ka weyn mida ay heystaan Maraykanka iyo Yurub oo la isku daray;sannadka 2030, iyadoo la tixgalinayo cabirka dadka, wax soo saarka gudaha, qarshka lagu bixiyo ciidanka iyo maal gelinta aqoonta casriga ah. Waxaa kaloo lagaga digay warbixinta in uu jio koboc dhaqaale oo hooseeya iyo hoos u dhac ku iman doonta heer nololeedka wadamadaa horay u maray.
Masar: Dawlada Masar ayaa ka codsatay in dib loo dhigo muddo bil ah deen ay siin laheed Hay’ada Lacagta Adduunka ee IMF, sababtuna ay tahay qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka Masar. Lacagta deenta ah ayaa waxey gaareesaa $4.8 billion oo dollar. Dastuurka lagu muransanyahay ayaa lagu wadaa in dalkaas looga codeeyo maalinta Sabtida ee soo socoto.
Saudi Careebiya: Sacuudiga ayaa ugu deeqay $100 million oo dollar kooxaha mucaaradka ee la dagaalamaya dawlada Suuriya. Wasiirka Arrimaha Dibada ee Sacuudiga Saud Al-Faisal ayaa ku celiyay in ay aqoonsan yihiin kooxda mucaaradka ah iney yihiin kooxda kaliya ee matesha dadka Siiriya, wuxuuna ku booriyay iney midnimadooda adkeeyaan.
San Diego: Gabar Soomaaliyeed ayaa waxaa xukuntay maxkamad kutaal San Diego, ee Maraykanaka; gabartan ayaa lagu xukumay 8 sanno oo xariga ah kadib markii ay caawisay Shayaadiinta Shabaabka. Waana qofkii ugu horeeyay ee la xukumo tan iyo markii la billaabay dagaalka lagula jiro dadka caawiya Shayaadiinta Shabaabka, dad badan ayayna dawlada Maraykanku qabatay qaar badan oo ka mid ahna waxey sugayaan maxkamad.
Israel: Dawlada Isaraa’iil ayaa aad u xiiseeneesa in uu Xiriir dhexmaro Turkiga iyo Israa’iil taas oo ay ka faa’iidi doona labada dal gaar ahaan dhinaca qataraha kaga imanaya dhinacyo kale oo seddaxaad, ayuu yiri Ra’iisal Wasaaraha Israa’iil Netanyahu Dec. 10.
“Labadayada waxaan dareemeenaa cadaadis iyo qataro. Xiriir wannaagsan oo dhexmara Turkiga iyo Israa’iil waxey noo ogolaaneesaa labadayada wadan inaan ka adkaano qatarahaas mustaqbalka,” Ayaa laga soo xigtay Anatolia isagoo sidaa dhahaya. Cabsi aad u weyn ayey Israa’iil ka qabtaa Iran iney sameesato hubka nukliyeerka. Turkiga iyo Israa’iil ayaa isku dhacay kadib markii dawlada Isaraa’iil ay dishay dad Turkish ah oo macaawino u waday dadka Falastiiniyiinta, xilligaa dilka dhacay kadib xiriirka labda dal ma uusan fiicneen.